သမိုင်းတစ်လျှောက် အဆိုးရွားဆုံးထောင့်ကန်ဘောကန်တင်သူဖြစ်လာတဲ့ သောမတ်စ်မူလာ |
သမိုင်းတစ်လျှောက် အဆိုးရွားဆုံးထောင့်ကန်ဘောကန်တင်သူဖြစ်လာတဲ့ သောမတ်စ်မူလာ
March 4, 2020 phyo Global News, News 0
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကွင်းလယ်တိုက်စစ်သမား သောမတ်စ်မူလာဟာ ရှော်လ်ကေးကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပိုကယ်ဖလားပွဲစဉ်မှာ ပြိုင်ဘက်ကို အလစ်အငိုက်ယူပြီး ထောင့်ကန်ဘောကနေ လျင်လျင်မြန်မြန် ပေးပို့ခဲ့ပေမယ့် လိုရာမရောက်ခဲ့တဲ့အပြင် အဆိုးရွားဆုံးထောင့်ကန်ဘောကန်တင်သူအဖြစ်တောင် ဝေဖန်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
ဘိုင်ယန်ဟာ နောက်ခံလူ ကင်မစ်ရှ်ရဲ့ဂိုးကြောင့် ဝ-၁ ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိကာ ပိုကယ်ဖလားဆီမီးဖိုင်နယ်ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒီပွဲမှာ မူလာရဲ့လွဲချော်မှုက အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမနီအသင်းနဲ့အတူ ကမ္ဘာ့ဖလားရရှိခဲ့တဲ့ မူလာဟာ ပွဲချိန် ၅၁ မိနစ်မှာ ရရှိလာတဲ့ထောင့်ကန်ဘောကို မကန်ဘဲ ကွင်းထဲကို လမ်းလျှောက် ပြန်ဝင်လာပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ကင်မစ်ရှ်က သူကန်မယ့်ပုံစံမျိုးနဲ့ အလံတိုင်နားပြေးလာပေမယ့် မူလာက နောက်ပြန်လျှောက်လာကာ ဂိုးစည်းနားမှာရှိတဲ့ ကော်တင်ညိုကို လျင်လျင်မြန်မြန်ပဲ အနိမ့်ဘောပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူပေးလိုက်တာက တကယ့်ကိုဆိုးရွားလွန်းခဲ့ပြီး ကော်တင်ညိုဆီ မရောက်ဘဲ ဂိုးလွန်ဘော တန်းဖြစ်သွားပါတယ်။
ပြောရရင် ယမန်နှစ်ချန်ပီယံလိဂ် ဆီမီးဖိုင်နယ် ဒု-အကျော့ပွဲစဉ်အဖြစ် ဘာစီလိုနာကို ၄-၀ ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့ဲတဲ့ပွဲမှာ အိုရီဂီအတွက် အကောင်းဆုံးဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ လီဗာပူးညာနောက်ခံလူ အာနိုးလ်ရဲ့ပုံစံအတိုင်း လိုက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အာနိုးလ်က အိုရီဂီဆီ ကွက်တိ ပေးပို့နိုင်ခဲ့ပေမယ့် မူလာကတော့ ဆိုးဆိုးရွားရွားပဲ ဂိုးလွန်ဘောဖြစ်သွားတာပါ။
မူလာရဲ့ Reaction က ပရိသတ်တွေ သတိထားမိလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အိမ်ရှင်ရှော်လ်ကေးပရိသတ်တွေရဲ့လှောင်ပြောင်မှု ခံခဲ့ရပြီးနောက် မူလာလည်း စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ မြက်ခင်းပေါ် ဒူးထောက်မှောက်ချလိုက်ပါတယ်။
မူလာဟာ ဒီရာသီမှာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ ၉ဂိုးသွင်းယူကာ ဂိုးဖန်တီးမှု ၁၇ကြိမ်အထိ ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။
THOMAS MULLER YOU LEGEND. #Konon pic.twitter.com/BHLODGCr67
— Box2Box Football Podcast (@Box2BoxBola) March 4, 2020
သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အဆုိးရြားဆုံးေထာင့္ကန္ေဘာကန္တင္သူျဖစ္လာတဲ့ ေသာမတ္စ္မူလာ
ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္ကြင္းလယ္တုိက္စစ္သမား ေသာမတ္စ္မူလာဟာ ေရွာ္လ္ေကးကို အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ ပုိကယ္ဖလားပြဲစဥ္မွာ ၿပိဳင္ဘက္ကို အလစ္အငိုက္ယူၿပီး ေထာင့္ကန္ေဘာကေန လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေပးပုိ႔ခဲ့ေပမယ့္ လုိရာမေရာက္ခဲ့တဲ့အျပင္ အဆုိးရြားဆုံးေထာင့္ကန္ေဘာကန္တင္သူအျဖစ္ေတာင္ ေ၀ဖန္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။
ဘုိင္ယန္ဟာ ေနာက္ခံလူ ကင္မစ္ရွ္ရဲ႕ဂိုးေၾကာင့္ ၀-၁ ဂိုးနဲ႔အႏိုင္ရရွိကာ ပိုကယ္ဖလားဆီမီးဖုိင္နယ္ကို တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီပဲြမွာ မူလာရဲ႕လြဲေခ်ာ္မႈက အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ာမနီအသင္းနဲ႔အတူ ကမၻာ့ဖလားရရွိခဲ့တဲ့ မူလာဟာ ပဲြခ်ိန္ ၅၁ မိနစ္မွာ ရရွိလာတဲ့ေထာင့္ကန္ေဘာကို မကန္ဘဲ ကြင္းထဲကို လမ္းေလွ်ာက္ ျပန္၀င္လာပါတယ္။
ဒီအခ်ိန္မွာ ကင္မစ္ရွ္က သူကန္မယ့္ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ အလံတုိင္နားေျပးလာေပမယ့္ မူလာက ေနာက္ျပန္ေလွ်ာက္လာကာ ဂိုးစည္းနားမွာရွိတဲ့ ေကာ္တင္ညိဳကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ပဲ အနိမ့္ေဘာေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူေပးလုိက္တာက တကယ့္ကိုဆုိးရြားလြန္းခဲ့ၿပီး ေကာ္တင္ညိဳဆီ မေရာက္ဘဲ ဂုိးလြန္ေဘာ တန္းျဖစ္သြားပါတယ္။
ေျပာရရင္ ယမန္ႏွစ္ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆီမီးဖုိင္နယ္ ဒု-အေက်ာ့ပြဲစဥ္အျဖစ္ ဘာစီလုိနာကို ၄-၀ ဂိုးနဲ႔အႏိုင္ရခဲ့ဲတဲ့ပဲြမွာ အိုရီဂီအတြက္ အေကာင္းဆုံးဂုိးဖန္တီးေပးခဲ့တဲ့ လီဗာပူးညာေနာက္ခံလူ အာႏိုးလ္ရဲ႕ပုံစံအတုိင္း လုိက္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အာႏိုးလ္က အုိရီဂီဆီ ကြက္တိ ေပးပို႔ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ မူလာကေတာ့ ဆုိးဆုိးရြားရြားပဲ ဂိုးလြန္ေဘာျဖစ္သြားတာပါ။
မူလာရဲ႕ Reaction က ပရိသတ္ေတြ သတိထားမိေလာက္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အိမ္ရွင္ေရွာ္လ္ေကးပရိသတ္ေတြရဲ႕ေလွာင္ေျပာင္မႈ ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ မူလာလည္း စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႔ ျမက္ခင္းေပၚ ဒူးေထာက္ေမွာက္ခ်လိုက္ပါတယ္။
မူလာဟာ ဒီရာသီမွာ ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းအတြက္ ၿပိဳင္ပြဲစုံ ၉ဂိုးသြင္းယူကာ ဂိုးဖန္တီးမႈ ၁၇ႀကိမ္အထိ ျပဳလုပ္ေပးထားႏုိင္ပါတယ္။
တွမ်ဇီဘီ နဲ့ ဖိုဆုမန်ဆာ တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းများ…….
ဘာစီလိုနာယူ-၈ အသင်းမှာ ဖခင်တွေရဲ့ခြေရာကိုနင်းနေကြတဲ့ သီယာဂိုမက်ဆီနဲ့ဘင်ဂျမင်ဆွာရက်ဇ်